AVY AIZA NY FAMONJENA AHY ? | Radio Agape
Asa aloha ianao ry mpamaky raha mba mahatsikaritra ity teny ao amin’ny Isaia 20: 24 ity hoe » Mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ny tany . Ny olona mamo tokoa mantsy dia tsy mba mahavita mitondra ny tenany intsony fa mivembena eny izy, mirona miankavia, indraindray miankavanana, ka moa tsy toy izany koa va ny zava-misy raha tsy hiresaka afa-tsy ny toetr’andro fotsiny isika ? Mafana, mangatsika, man’orana sns… Zava-misy izay tsy misy olona afaka mifehy azy hatramin’izay ka hatramin’izao , na dia ny manam-pahaizana ambony indrindra aza.
Eo amin’ny Fivelomana , raha mihaino vaovao isika amin’ireo ; Radio, Gazety, Televiziona, sy ny Internet dia samy mampiseho avokoa fa mitombo ny tsy an’asa ary io dia saika maneran-tany mihintsy . …Kivy sy ketraka ny fon’ny zanak’olombelona. Eo amin’ny Fitsaboana dia mitombo isa koa ny olona voan’ny homamiadana (cancer) vokatry ny adim-piainana sakafo tsy zarizary dia betsaka no tapaka lalan-drà (AVC), ao koa ireo aretim-baovao izay tsy mbola ahitana fanefitra….
Kivy sy ketraka ny fon’ny zanak’olombelona. Eo amin’ny Fiarahamonina dia mitombo ny herisetra sy ny habibiana, ny vono-olona, ny halatra. Tsy misy intsony ny Fandriam-pahalemana, Kivy sy ketraka ny fon’ny zanak’olomblena tsy mahita izay hianteherana intsony , ka hoy izahay manontany anao hoe…. mba avy aiza ny Famonjena anao?
Raha efa zanak’Andriamanitra hianao mamaky ity lahatsoratra ity dia mino aho fa azonao antoka tsara fa na dia mivembena toy izany aza ny tany dia tsy mba isan’ireo izay matahotra sy mangovitra akory ianao fa fantatrao fa ireo voalaza eo ambony ireo dia voasoratra fa vokatrin’ny fahotan’ny olombelona ihany ka dia lasa mitambesatra amin’ny tany izany ary dia ho potraka izy ka tsy ho tafarina intsony (Vakio Isaia 24. 20 ). Moa tsy izany va no zava-misy ami’nizao fotoana izao tsy tafarina intsony ny firenana sy ny toe-karena mareran- tany , ary tsy izany ihany fa eo amin’ny ny lafiny rehetra mihintsy , manomboka ao lafin’ny tokatrano izany .
Mitady famonjena etsy sy eroa ra-olombelona, satria very hevitra,sy mamoy fo,ka mitady sy mikaroka ireo izay hametraka ny fitokisany amin’ny zava-misy ety ambonin’ny tany. Raha ny baiboly anefa no jerena dia tsy misy famonjena afa-tsy ao amin’ny JESOSY KRISTY irery ihany. Izy ilay nanaiky nitondra ny heloko sy ny helokao ka nohomboina teo ambony Hazofijaliana…. Izao no vanim-potoana tsara indrindra hanatonanao Azy, fa sao dia tara loatra ka hanenina ianao…Raiso ary Izy ho Tompo sy Mpamonjy anao dia vakio ny tohin’ io Salamo io fa ho voavonjy ianao ; « .Salamo 121 : 2… »
Powered by WordPress | Theme Designed by: r4i dsi | Thanks to r4 cards uk, website r4 3ds card and r4 dsi cards